OMN: Turtii Abukaattoo Kadir Bulloo Waliin – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Turtii Abukaattoo Kadir Bulloo Waliin
By Dr Saphaloo Kadiir
Eega warraaqsi keelloo Oromoo kun jabaatee itti fufe ‘Bilxiginnaan’ warraaqsa adii jattee akka dhuftu dubbachaan ture. Boru hiriira deeggarsaa yaammatanii jiran. Kan dhiiga Haacaaluu Hundeessaa irratti dhiichisu ammoo ilma Oromoo tahuu miti safuu Oromootuu nama sirnaan hin beeyne qofa. ‘Birlxiginnaan’ mooraalii ummata Oromoo hiriira deeggarsaa ittiin gaafattu hin qabdu. Oromooniis jaalala ‘Bilxiginnaa’ fiAbiy Ahmad ittiin deeggaru hin qabu, hin qabaatuusi. Kun ajandaa nuuf tahuu hin qabu. Ajandaan Oromoo guddaan warraaqsa Keelloo finiinsuufi injifannoo duraa saamamte deebifatee abbaa biyyaa tahuu isaa mirkaneeffachuu dha. Kaabineefi kaadiree ganda keessa ceetu mogolee ciraa adabaan teeysisaa. Dabballoonniifi jabbiloonni ‘Bilxiginnaa’ duraanuu warra gos-lamee jidduu dhalate waan tahaniif Oromoofi Oromummaa akka bakka hin buune beekkamaadha. Hiriira kana humnaan akka baatan yoo isin godhan ammoo gara warraaqsa keellootti jijjiiruun dirqama taha.
Dhaamsa Qeerroo fi Qarree Oromoo hawaasa Oromoo hundaaf.
“Nebil keenya dhaamsa kana Oromoo hunda biraan nuuf gahi. Hiriira Boru Abiy Ahmediif yaamame irratti uffata keelloo uffachuun nutiis sagalee teenya dhageessisuu qabna ja’an Qeerroo fi Qarreen Oromoo.
Hiriira deeggarsa Abiy gara hiriira deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromootti jijjiiruuf ummanni keenya qophii isaa xumuuree jira. Kana gochuuf immoo uffata keelloo uffachuun tokkummaan bakka hiriirri deeggarsa Abiy Ahmed itti qophaa’uu cinatti hiriira deeggarsa Jawar Mohammed fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo cinaa dhaabbachuun sirna Oromummaa balfee Oromoo hidhu fi ajjeesu kanaan ni mormina jechuun Qeerroo fi Qarreen Oromoo ibsanii jiru.
Mirga namaa hin tuqnu keenyaas hin tuqsiifnuu dhaadannoo ja’uun nutiis Hiriira deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo cinaa dhaabbachuu fi sagalee isaaniif tahuu itti fufna. Isaaniis Abiy Ahmed deeggaranii hiriira deeggarsa bahuuf mirga qabu..nutiis akkuma isaaniitti mirgi keenya nuuf eeggamu qabaa jechuun Qeerroo fi Qarreen Oromoo ibsanii jiru. Uffata keelloo uffachuun hiriira kana irratti hirmaachuun Qeerroo fi Qarree qofa osoo hin taane hawaasa Oromoo hunda tahuu qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii jiru.”
Warri Habashaa AJAJA dabarsu PPn ni raawwatiif
Habashaan RIB sangoota sassaabaa jette PPn Oromiyaa ni raawwachiifte,
Habashaan Jawaarfaa nuuf hidhaa OMN nuuf cufaa jettee PPn Oromiyaa ni raawwachiifti,
Habashaan Siyaasi Wallagaa cabuu qaba ABOn diigamuu qaba jette PPn Oromiyaa ni raawwachiifti,
Habashaan Gumuz nuuf rukutamuu qabu jettee, PPn Oromiyaa ABO Shaneetu anchi jira jettee Gumuz Matakkala yaa haleelamanu jettee raawwachiifti,
Habashaan Dhaaboleen siyaasaa Oromoo biyya diigu Ugguramuu qabu jettee, PPn Oromiyaa ni raawwachiifteef, PPn Oromiyaa kaleessa TPLFf ergamaa baate, Amma Habadhaaf ergamaa jirti gaafa jennu sababa waan qabnuugi.
Ergamtummaa itti guddatan
Minishirii Gumaa Sabaa
Dubbii himaa ABO obbo Battee Urgeessaa dhimma ABO fi WBO irratti dubbii ijoo EthioTube waliin Amarifaan godhan keessaa :
Dhaabni shanee jedhamu hin jiru. Kan jiru Waraana Bilisumaa Oromoo (WBO) dha. Nuyi deemsa protocolii Addunyaa eeggateen qaamni sadaffaa gidduu seenuun, mariitiin adeemsi meshaa hiikkachuu akka godhamu gaafannee ture. Biltsiginnaan garuu kana gochuuf fedhii hin qaban ture.
Gaarummaan osoo jiraate mootummaan Eritrea waliin araara buusee, sudaan walitti araarse, Waraana Bilisummaa Oromoo waliin walii galuu hin dadhabu ture. Garuu isaan nagaa hin barbaadan. Kanaafi miseensa WBO muraasa warra mootummaa kana amanee meshaa hiikee gale summii shayiitti dabalanii obaasuun warri meeshaa hin hiikkanne shakkii keessa akka seenan kan godhan.
Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) akkuma sirna Gadaa hogganaa jijjiira ta’a malee kayyoo fi seerri ittiin bulmaata isaa isuma ganamaati, hin jijjiiramu. Kanaafi deemsa isaa waggaa 44 keessatti maqa-balleessi, yakka, Tplf’n ganamee qabsoo hidhannooti deebi’u fi qormaatalee kana fakkaatan keessa darbuun kan asiin gahe